Kudzora Kwehunhu - Newsway Valve Co., Ltd.
NSW Yemhando Yekudzora Sisitimu
Mavharuvhu anogadzirwa neNewsway Valve Company anonyatso tevera iyo ISO9001 yemhando yekudzora sisitimu yekudzora mhando yemavharuvhu muitiro wese kuona kuti zvigadzirwa zviri 100% zvinokodzera. Isu tinowanzo tarisa vatapi vedu kuona kuti mhando yezvinhu zvekutanga inokodzera.
Chimwe nechimwe chedu zvigadzirwa chichava nemutsara waro wekuteedzera kusimbisa kuteverwa kwechigadzirwa.
Gadzira Drawing zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye kuongorora kugadzirisa dhizaini.
Kudzora kwemhando chikamu:
1.Kuongorora kunoonekwa kwekukanda: Mushure mekukanda kwasvika kufekitori, zviongorore zvakaputsika zvinoenderana neMSS-SP-55 standard uye ita marekodhi ekusimbisa kuti kukanda hakuna matambudziko emhando yepamusoro vasati vaiswa mukuchengetedza. Zvevharuvhu castings, isu tichaitisa kupisa kurapwa cheki uye mhinduro yekurapa cheki kuona kushanda kweyakagadzirwa chigadzirwa
2.Valve Wall ukobvu bvunzo: Castings akaunzwa mukati fekitori, QC ichaedza rusvingo ukobvu weiyo vharuvhu muviri, uye inogona kuiswa mukuchengetedza mushure mekugona.
3. Raw Raw performance performance ongororo: izvo zvinouya zvinovhenekwa zvemakemikari zvinhu uye zvimiro zvemuviri, uye zvinyorwa zvinogadzirwa, uyezve zvinogona kuiswa mukuchengetedza mushure mekugona kwavo.
4. NDT bvunzo (PT, RT, UT, MT, inosarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi)
1. Machining size yekuongorora: QC macheki uye anorekodha saizi yakapera zvinoenderana nemadhirowa ekugadzira, uye anogona kuenderera kunhanho inotevera mushure mekusimbisa kuti inokodzera.
2. Chigadzirwa chekuita kuongorora: Mushure mekunge chigadzirwa chaunganidzwa, QC ichaedza uye kurekodha kuita kwechigadzirwa, uye wozoenderera kunhanho inotevera mushure mekusimbisa kuti inokodzera.
3. Valve saizi yekutarisa: QC inozoongorora saizi yevhavha zvinoenderana necontraini dhizaini, uye woenderera kunhanho rinotevera mushure mekupasa bvunzo.
4. Valve sealing performance performance bvunzo: QC inoitisa hydraulic bvunzo uye mweya kumanikidza bvunzo pasimba revhavha, chigaro chisimbiso, uye chepamusoro chisimbiso maererano neAPI598 zviyero.
Paint kuongorora: Mushure mekunge QC yasimbisa kuti ruzivo rwese rwunokodzera, pendi inogona kuitiswa, uye pendi yakapera inogona kuongororwa.
Packaging kuongorora: Ita shuwa kuti chigadzirwa chakanyatso kuiswa mubhokisi rekunze rehuni (plywood bhokisi remapuranga, fumigated bhokisi remuti), uye tora matanho ekudzivirira hunyoro nekupararira.
Hunhu uye vatengi ndiyo hwaro hwekupona kwekambani. Newsway Valve Kambani ichaenderera nekuvandudza nekuvandudza mhando yezvigadzirwa zvedu uye kufambirana nenyika.